लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home लगानी लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेड
लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेड
मुख्य कार्यालय : दरबारमार्ग, काठमाडौं
स्थापना : २०५५ साउन १
मुख्य कार्यकारी अधिकृत : शोभनदेव पन्त
संस्थापक शेयर : ६६ प्रतिशत
सर्वसाधारण शेयर : ३४ प्रतिशत
स्वदेशी संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सामूहिक लगानीबाट स्थापना भएको यो बैङ्कले २०५५ साउन १ देखि वित्तीय सेवा शुरू गरेको हो । यसमा संस्थागत प्रवर्द्धकहरूको शेयर स्वामित्व ४२ प्रतिशत भने व्यक्तिगत प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको क्रमश: २४ र ३४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । यस बैङ्कमा कर्मचारी सञ्चय कोषले सबैभन्दा बढी १४ दशमलव ५५ प्रतिशत शेयर लगानी गरेको छ । बैङ्किङ क्षेत्रको विकासक्रमसँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गए पनि अन्य वाणिज्य बैङ्कका तुलनामा यो बैङ्कले शाखा विस्तारलाई कम महत्त्व दिएजस्तो देखिन्छ । केही वर्षपहिला सङ्कटग्रस्त भएको यो बैङ्कको वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि हालसम्म यसले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई कुनै पनि प्रतिफल दिन सकेको छैन । हाल बैङ्कको वित्तीय अवस्था सही दिशामा आइसकेकाले चालू आव ०६७/६८ को मुनाफाबाट लगानीकर्ताहरूले थोरै भए पनि प्रतिफल पाउने सम्भावना बढेको छ । अहिले रू. १ अर्ब ३० करोड चुक्ता पूँजी रहेको यो बैङ्कले आगामी २ वर्षभित्र चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेर २ अर्ब पुर्याउनुपर्ने हुनाले हकप्रद वा बोनस शेयर वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस बैङ्कको शेयर मूल्यको विगत १ सय ८० दिने ट्रेण्डलाई प्राविधिक विश्लेषणमध्येको आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा हाल यसको आरएसआई रेखा ६५ तिर देखिएको छ । यसले यो कम्पनीको शेयर ओभरबट जोनबाट भर्खरै न्युट्रल जोनमा झरेको देखाउँछ । केही समय अगाडि स्केल ७२ सम्म पुगेको यो कम्पनीको आरएसआई सो तहमा सामान्य प्रतिरोध पाएर अहिले स्केल ६५ मा देखिएको छ । यसले यो बैङ्कको शेयरमूल्य सामान्य घट्दो अवस्थामा रहेको सङ्केत गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षसमाप्त हुन लागेको र बैङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई दिने प्रतिफल घोषणा गर्ने समय आउन लागेको छ । तसथ यो कम्पनीको शेयर विक्री गर्न चाहनेहरूका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ भने खरिदकर्ताहरूले आफ्नो लगानी योजनाअनुसार निर्णयगर्नु उचित हुनेछ ।
आव ०६७/६८ को अपरिष्कृत तेस्रो वित्तीय विवरणअनुसार यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्व ३० करोड रहेको छ । सोही वित्तीय विवरणअनुसार चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म यस बैङ्कले रू. २८ करोड ६१ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो रकम गत आवको सोही अवधिको भन्दा ३ दशमलव ९३ प्रतिशत कमी हो । विगतमा ऋणात्मक रहेको यस बैङ्कको पूँजीकोषलाई परिपूर्ति गरी अहिले बैङ्कले सञ्चित नाफा रू. ४० करोड ९९ लाख पुर्याएको छ । सो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको भन्दा १ सय ६४ दशमलव ७८ प्रतिशत बढी हो । यसको जगेडा कोष चालू आवको चौथो त्रैमाससम्म पनि वृद्धि भएमा लगानीकर्ताहरूले पाउने प्रतिफलमा थप वृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसैगरी, यो कम्पनीको निक्षेप सङ्कलन पनि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ८ दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल रू. ६ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । सो अवधिमा बैङ्कको लगानी निक्षेपभन्दा उच्च दर ६७ दशमलव ०४ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. १ करोड ५५ पुगेको छ भने कर्जा तथा ऋण प्रवाह भने केही कम दर ६ दशमलव ७६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव २० प्रतिशत कम भएर २ दशमलव ४६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
यस बैङ्कका प्रमुख वित्तीय परिसूचक अझै पनि सुधारोन्मुख अवस्थामा नै रहेकाले हालसम्म लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिफल वितरण गरेको छैन । विगत ५ वर्षदेखि हालसम्म यो बैङ्कले हकप्रद शेयर निष्कासनबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको प्रतिफल दिएको छैन । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म आइपुग्दा बैङ्कका वित्तीय परिसूचकहरूमा निकै सुधार भएको देखिन्छ । कम्पनीका मूल्य-आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आय र किताबी मूल्यमा विस्तारै सुधार भइरहेको छ । वित्तीय परिसूचकहरू सबल बन्दै गएअनुसार बैङ्कको नाफामा पनि अहिलेकै गतिमा सुधार भएमा आव ०६७/६८ का लागि लगानीकर्ताहरूले कमै भए पनि प्रतिफल पाउने सम्भावना छ ।
शेयर कारोबार गतिविधि :
• राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रू. २ अर्ब पुर्याउन यो बैङ्कले लगभग ५२ प्रतिशत हकप्रद या बोनस शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको वित्तीय अवस्थाका आधारमा बैङ्कले सबै बोनस शेयर दिने अवस्था छैन । त्यसैले यसपालि केही मात्रामा बोनस शेयर वितरण गरी अर्को वर्षपुन: बोनस शेयर वा अहिले नै हकप्रद दिनुपर्ने अवस्था छ ।
• अहिले बैङ्कको जगेडा कोषमा आएको उल्लेख्य सुधारले नगद लाभांश दिने सम्भावना पनि बढेको छ । तर, उक्त लाभांश दर भने खासै बढी हुने छैन । हाल शेयरमा लगानी गरी करीब ४ महीनासम्म प्रतीक्षा गर्ने लगानीकर्ताहरूले ५ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा नगद लाभांश प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
• केही समय अगाडि रू. २ सय ४५ को तहमा सामान्य प्रतिरोध पाई रू. १ सय ८५ सम्म आएको यो कम्पनीको शेयरमूल्य केही समय बढ्दो अवस्थामा नै देखिन सक्छ । त्यसपछि भने सामान्य अवरोध पाउन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ ।